तपाईंको गुगल अकाउन्टअरू कसैले चलाइरहेको छ वा छैन, यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ? – झुल्केघाम
तपाईंको गुगल अकाउन्टअरू कसैले चलाइरहेको छ वा छैन, यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ?
माघ २५ २२:२६ ५८७
काठमाडौं,माघ २५ । कम्प्युटर तपाईंको नियन्त्रण वा दृष्टिभन्दा बाहिर पर्ने बित्तिकै कसैले मेरो कम्प्युटरमा पहुँच पुर्‍याइरहेको छ कि भन्ने डरले सबैलाई सताउँछ । कहिलेकाहिँ हामी आफ्नो जीमेल अकाउन्ट कम्प्युटर वा मोबाइलमा यत्तिकै खुल्ला छोडेर जान्छौं । यस्तो बेला तपाईंको अकाउन्टलाई जोकसैले एक्सेस गरिरहेको हुन सक्छ ।
गुगलको सेक्युरिटी चेकअपमा गएर गुगलको सिस्टमले सम्भावित सुरक्षा इस्युको रुपमा पहिचान गरेको प्रत्येक वस्तुलाई समिक्षा गर्नुहोस् । परिवर्तन गर्न चाहेको खण्डमा परिवर्तन पनि गरिदिनुहोस्।